दक्षिण कोरियाको ईन्छनमा पुलबाट आ’त्मह’त्या गर्न लागेका कोरियनलाई नेपालीले यसरी बचाए !
August 8, 2020 936
दक्षिण कोरि’याको इन्छ्न सहरमा अव’स्थित नामदोङ खोङ्दान भन्ने ठाउको पुल बाट आ’त्मह’त्या गर्न लाग्दै गरेको एकजना कोरियन नागरिकलाई २ जना नेपाली र केही भेतनामी हरुले बचा’एका छ्न ।
हिजो राति करिव ११:३० बजे तिर पुलमा कोरियन नाग’रिकले आफु सङ्ग भएको मोबाइल , पर्श , आइडी कार्ड भुईमा राखेर शंका’स्पद गतिविधि गर्दै झु’न्डिदै गर्दा नेपा’ली तथा भियत’नामी हरुले देखेपछी लगत्तै त्यस ठाउँमा गएका थिए ।
घट्ना भए लगतै पुलिस प्रशासन’मा खबर गरेर पुलिसले पिडि’तलाई लगेको नेपाली साथी’हरुले जा’नकारी दिनु भएको छ । उहाह’रुलाई कोरियन प्रहरि’ले राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिदै उहाह’रुको नाम र मोबाइल न नोट गरेर लगे’को जानकारी ने’पाली साथीहरुले दिनु भएको छ ।
उहा’हरुले गर्नु भएको यो साहसी का’मको लागी हामि कोरि’यामा रहेका सम्पुर्ण नेपाली’हरुको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र स्या’बासी दिन चाहन्छौ । – कान्तिपुर प्रेस (ईपीएस छिङ्गु)
यो पनि …. कोरि’या जान नाम निकाले’काको भिषा रद्द हुन थाल्यो,काम’दार निराश !
कडा मेहनत गरेर कोरि’याको लागि नाम निकाले पनि जान नपाउँदा ८ हजार नेपाली कामदारहरु निराश भए’का हुन् । कोरिया जाने व्यवस्था मिलाईदिन उनीहरुले ईपीएस संघर्ष समिति मार्फत बारम्बार आग्रह गरेपनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
लक’डाउन भएको कारण अन्त’राष्ट्रिय उडान नहुँदा उनीहरु कोरिया जानबाट बन्चित भएका हुन् । सबै प्रक्रिया पुरा गरेकाहरुको भिषा कोरिया सर’कारले खारेज गर्न थालेपछि उनीहरु थप नि’राश बनेका हुन् ।
लकडाउनकै बीच करिब आठ सय नेपाली:को भिसा रद्द भैसकेको संघर्स समितीका संयो:जक अजय सोडारी बताउछन् । नेपालबाट कोरीया जान अहिले उडान नभए पनि चार्टर उ’डानको ब्यबस्था सरकारले गरे त्यसको सबै खर्च आफुहरुले नै बेहोर्ने सो:डारी बताउँछन् ।
कडा मिहेनत र परि:श्रम गरेर बल्ल बल्ल कोरिया:को लागि नाम निकालेकोमा त्यो पनि व्यर्थ हुनेहो कि भन्ने चिन्ता छ उनलाई ।
धेरै जना:को भिसा रद्द भईसक्दा पनि सरका:रले कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । उनका अनु:सार भिसा रद्द हुँदा कोरिया जानकोलागि फेरी भाषा पास गरेर सबै प्रक्रि:या पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण:प्रसाद दाहाल यसबारे कोरिया सरका:रसँग समन्व:य भइरहेको र अब छिटै समस्या समाधान हुने बताउछन् । छलफल र समन्व’यबारेमा थप जानका:री लिन खोज्दा उनले केहि बताएनन्।
यसै विषयमा श्रम, रोजगा’र तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्त सुमन घिमिरेको पनि जवाफ महानिर्देशक दाहाल ले जस्तै मिल्दो जुल्दो छ। महामारीका कारण उनीहरु को’रिया जानबाट रोकिएको र कोरिया सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरीरहेको उनी बता’उछन् ।
तर काहिले देखि उनीहरु’लाई कोरिया लैजा’ने व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन उनी पनि आलटाल गर्छन् । उनी पनि समस्या चाडै समाधान हुने बताउछन्। रा’म्रो आय हुने भएकाले ठुलो संख्या’मा नेपालीहरु श्रम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् । – बीज पाटी
Prevआज साउन २४ गते शनिबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्…..
Nextश्रीमानले छोडेपछि टिक’टकमा भाइ’रल युवती रुदै मिडिया’मा, २ बर्षि’य बच्चाको बिचल्ली (भिडियो)